သက်ဝေ: ပျော်ရွှင်စရာ ထိုသောကြာ
khin oo may September 11, 2009 at 10:30 PM
Rita September 11, 2009 at 10:37 PM
ဓူဝံကြယ် မြေမှာ ခကြွေ ကောင်းကင်မှာ နေလတွေ ကွယ်စေ..
(ဖြေပါ အဲဒီ သီချင်း ခေါင်းစဉ်)
မီးမီးချစ် September 11, 2009 at 11:13 PM
အဲ့ဒါ ယူ့ သားပဲ အိုင်ပီ..
လင်းဒီပ September 11, 2009 at 11:46 PM
သင်္ကြန်မိုးကားထဲမှာ ဦးနေအောင်နာမည်က ဦးငြိမ်းမောင်ပါ..ဒေါ်ခင်သန်းနုနာမည်က ဘယ်သူပါလဲလို့ သိချင်ပါတယ်..။(ပဟေဠိ ထပ်ဖွက်သွားပါတယ်..:P)
Moe Cho Thinn September 11, 2009 at 11:53 PM
ပျော်စရာကြီး မမရေ။ ဘေးကနေ နားထောင်ချင်ပါတယ်။ ချိုသင်းကတော့ ဘာမှ သိပ်မမှတ်မိဘူးရယ်..
Phyo Evergreen September 12, 2009 at 12:07 AM
PAUK September 12, 2009 at 1:41 AM
ကျနော်က မလှထုံထက် ထုံပါတယ်..
မီယာ September 12, 2009 at 5:34 AM
ပျော်စရာကြီး မသက်ဝေ... လက်ညီကြလို့လည်း ဖြစ်မှာပါ။ လိုက်ဖြေကြည့်တာ ၂ခုလောက်ပဲ သိတယ် :(
မေငြိမ်း September 12, 2009 at 6:11 AM
တကယ်ပျော်စရာကြီး.. Rita နဲ့ လင်းဒီပ ပဟေဠိက ဘယ်သူ့ကို ဖြေခိုင်းတာလဲ အေ့...
ပုံရိပ် / Pon Yate September 12, 2009 at 8:54 AM
မဆိုးဘူး ပုံရိပ်လည်း တော်တော်များများ ဖြေနိုင်သွားတယ်။ ဟဲဟဲ။
လင်းဒီပ September 12, 2009 at 11:08 AM
တကယ်ပျော်စရာကြီး.. Rita နဲ့ လင်းဒီပ ပဟေဠိက ဘယ်သူ့ကို ဖြေခိုင်းတာလဲ အေ့..."
ဘယ်သူဖြေဖြေရပါတယ်ဗျ..ကျွန်တော်က အဖြေကို တကယ် သိချင်လို့ပါ...။
Waing September 12, 2009 at 11:54 AM
သင်္ကြန်မိုးကားထဲမှာ ဦးနေအောင်နာမည်က ဦးငြိမ်းမောင်ပါ..ဒေါ်ခင်သန်းနုနာမည်က ခင်ခင်ထားခေါ် ထား ပါ။ မုန့်ဝယ်ကျွေးတော့ လာထား :D
WWKM September 12, 2009 at 6:32 PM
မမသက်ဝေ ရေးထားတာက ပျော်စရာလေးနော်.း)
၀ါ က ရုပ်ရှင်သိတ်မကြည့်တဲ့သူဆိုတော့ မမတို့ပြော
တာလေးတွေ သိမနေဘူးရယ်လေ.. ညံ့ချက်. :P
သီဟသစ် September 12, 2009 at 9:01 PM
ရုံးမှာတော့ ထိုင်ရတဲ့နေရာ မကောင်းတာနဲ့ Gtalk မဝင်ရလို့ ပျော်စရာ သောကြာလေးတွေ မကြုံဖူးပါ
rose of sharon September 12, 2009 at 10:23 PM
Thant September 14, 2009 at 11:14 AM
ပျော်စရာကြီးနော်... သန့်တော့ အဲဒီလောက်မမှတ်မိဘူး ။ Rita: အဲဒါ သက်ဝေ သီချင်း
nu-san September 14, 2009 at 9:59 PM
မမသက်ဝေရေ.. ပျော်ဖို့ကောင်းလိုက်တာနော်.. သောကြာနေ့ဆို ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်ရတာ တကယ်စိတ်မပါဘူး.. စနေနေ့အတွက် ကြိုနားချင်နေပြီလေ.. တချိန်လုံး ရုံးဆင်းချိန်ပဲမျှော်နေတာ.. အခုဖွက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေက တီဗွီမှာ ခဏခဏ ပြတာဆိုတော့ အထဲက ဒိုင်ယာလေ့ာတွေပါ အလွတ်ရနေတယ်.. မမပို့စ်လေး ဖတ်ပြီး အဲဒီရုပ်ရှင်တွေတောင် ပြန်ကြည့်ချင်တယ်.. :)
တန်ခူး September 15, 2009 at 4:44 PM
ဟိဟိ… ခု အိပ်တွေ ငိုက်နေတယ်… မနေ့ က အပ်ရမယ့် ပရောဂျက်က ဒီနေ့ လုပ်ကောင်းနေတုန်း… ရုပ်ရှင်ဖွက်ချင်လိုက်တာ… ငယ်ငယ်တုန်းက စာရွက်ပေါ်မှာ ဗျည်းလေးတွေပဲရေးပြီး တလုံးချင်းဖော်တာ သတိရတယ်… ဥပမာ… မိမော်မေမ ဆို မမမမ လို့ ရေးပြီးဖွက်တာလေ… အရင်က ကားတွေဆို မင်းသားက မင်းသမီးကို ဘယ်လိုလေးကြည့်လိုက်တာက အစ မှတ်မိတယ်… ခုနောက်ပိုင်း ရုပ်ရှင်လဲ မကြည့်ဖြစ်တော့ပါဘူး… ကြုံတုန်းတခုဖွက်လိုက်ဦးမယ်… “ထမင်းစားပွဲမှာ ခွေးဝင်သည် ပျိုပျိုမစားချင်သည်… သူ့ နားကပ်တော့ ၀ဲစော်ညှီ ပျိုပျိုရွံပါသည်… ထွီ”… ဘယ်ကားလဲပြောပါ… လွယ်လွယ်လေး…ဟိဟိ
ခင်မင်းဇော် September 16, 2009 at 9:39 PM
ခင်မင်းဇော် September 16, 2009 at 9:41 PM
ထမင်းစားပွဲကို ခွေးဝင်သည် ပျိုပျိုရွံပါသည်..
သူ့နားကပ်ရင် ၀ဲစော်ညှီ ပျိုပျိုမစားချင်သည်.. အဲလိုလေ ဟဟ
အဲဒီကားမှာ မေဆွိ အကျီ င်္ဘယ်နှစ်ထည်လဲ သလဲ
T T Sweet October 6, 2009 at 11:12 PM
ရုပ်ရှင်တွေ အတော်မှတ်မိကြပါသလားကွယ်ရို့ ... တော်လဲတော်ကြပါပေတယ် ...
မေဆွိ ကျော်သူ မုန်းရခက်ကြီး အရမ်းကြိုက်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ အင်းကျီ ဘယ်နှစ်ထည်လဲတော့ မှတ်မိတော့ဝူး။